ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဘင်္ဂလီလို့ရေးခိုင်း၊ ထွက်ပြေးသွားအောင်နည်းမျိုးစုံ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလုပ်ဆောင်နေ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဘင်္ဂလီလို့ရေးခိုင်း၊ ထွက်ပြေးသွားအောင်နည်းမျိုးစုံ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလုပ်ဆောင်နေ …
ရိုဟင်ဂျာတွေကို အတင်းအဓမ္မ ဘင်္ဂလီလို့ ရေးခိုင်းတယ်။တိုင်းပြည်ထဲက ထွက်ပြေးသွားအောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်တယ်၊ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ဒီကိစ္စအားလုံးကို အစိုးရကိုယ်တိုင်က လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ ရာပါင်းများစွာ သောလူသားများက သက်သေခံနေပါတယ်။ဒါကိုဘယ်အချက်နဲ့ ငြင်းနိုင် မလဲ။
လူသားချင်း စာနာမူကို အပြစ်မဆိုပါ။ဒုက္ခရာက်နေသူများကို ကယ်တင်ခြင်းဟာ မွန်မြတ်လှပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဥပဒေစိုးမိုးဘို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် အနေနဲ့ရော၊ ဥပဒေ လွှမ်းမိုး ရေး အတွက် ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပါ ဒီကိစ္စမှာတာဝန် အပြည့်ရှိနေပါတယ်။
This entry was posted on February 11, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	2 Comments
← ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (အငြိမ်းစား)၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်နှင့် အပေါင်းအပါ ၅၀ ကျော်ကို တရားစွဲဆိုသွားမည်	အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ(လျှောက်ထားဆဲ)၏ (တကြိမ်) နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ →
2 thoughts on “ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဘင်္ဂလီလို့ရေးခိုင်း၊ ထွက်ပြေးသွားအောင်နည်းမျိုးစုံ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလုပ်ဆောင်နေ …”	Pingback: Anonymous